Websaydhkaaga Dhiig-baxa ah ayaa kuu horseedaya U-qalma Hoggaaminta | Martech Zone
Websaydhkaaga Dhiig-baxa ayaa keenaya U-qalmitaanno
Arbacada, Nofeembar 4, 2009 Arbacada, Nofeembar 4, 2009 Douglas Karr
TMI = Macluumaad Aad U Badan.
Inta badan shabakadaha waxaa lagu dhisay TMI. Waxaan jeclaan lahaa inaan sharad geliyo inay jiraan 5 goobood oo sare qof walba wuxuu raadiyaa degel internet caadi ah marka lagu daro bogga maalmahan:
Alaabada iyo Adeegyada
Soo dejisan (haddii aad bixiso)
Iskuxirayaasha Blogga iyo Iskuxidhka Warbaahinta Bulshada
Waxaan la shaqeynayay lamaane dhowr ah oo dhowaanahan ah waxaanan dib u riixayay mugga macluumaadka ay ku leeyihiin boggooda internetka. Saaxiib iyo jaalle, Kyle Lacy, ayaa dhowaan taas qoray tayo, adeeg iyo khibradba macno malahan Wuu saxan yahay - gaar ahaan websaydh.
Runtii ma ka filaysaa qof inuu xayeysiiyo wax ka duwan? Malaha “Haa haa, waxaan nahay khubaro waxaanna shaqo fiican ka qabannaa adeegga macaamiisha… laakiin tayadeena ayaa in yar naga dhiman. Diyaar ma u tahay inaad nala saxeexato?
Marwalba waxaan ku sifeeyey degel inuu yahay calaamadda hor taal dukaankaaga. Waxay u baahan tahay in si wanaagsan loo qaabeeyo, loo soo koobo, oo toos loo gaadho barta… dadka waawayn ee joogsadaana u ogaadaan waxaad samaynayso. Waxay sidoo kale ubaahantahay inay kujirto meel aad ufiican (SEO), laakiin taasi waa boosteejo kale. Haddii calaamadda ka baxsan meheraddaadu ay leedahay 25 tiir oo dhammaan alaabooyinka iyo adeegyada ay bixiyaan, miyaad akhrinaysaa iyaga oo ma geli doontaa? Mise waad bixi lahayd
Fursadaha ayaa ah, oo leh degel aad u ballaadhan, waxaad u qalmin hoggaamiyeyaasha waaweyn adigoon waligaa helin fursad aad ku iibiso. Haddii aad rabto inaad faahfaahin ka bixiso astaamahaaga iyo waxyaabaha aad bixiso, taasi waa fursad qaali ah oo loogu talagalay baloog. Haddii kale, hayso websaydhkaaga (aka calaamadda shabakadda), nadiif ah oo ilaa heer. Weligay ma aadin degel 100 bog ah oo waxaan ku idhi, "Wow, kani waa mid dhammaystiran oo si la yaab leh loo qaabeeyey!". Taa baddalkeeda, waxaa laga yaabaa inaan lumay… ma aanan helin wixii aan raadinayay… waana tagay.
Miyaadan i rumeysan?
Gal boggaaga 'Analytics' oo tiri tirada boggaga booqashooyinka ugu badan ee xisaabtamaya 95% ee taraafikadaada shirkadaha. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto (oo aad niyad jabto marka loo eego dhammaan shaqooyinka aad ka qabatay bogaggaas kale). Xitaa balooggan, oo leh in ka badan 2,100 farriin… 10 bog ayaa ka dhigan 95% taraafikada (iyo bogga xiriirka is mid ka mid ah!). Websaydhkaagu waa inuu bixiyaa sawir aad u cad. Immisa ka mid ah bogaggaas ayaa leh 100% qiimeyaal kacsan? Immisa ka mid ah ayaa leh eber booqasho?
Macaamiishaydu way fahmeen, horeyna waxay uga faa'iideysanayaan istiraatiijiyadda. Hal macmiil ayaa hada haysta macmiil soo galaya tiro tan oo macluumaad dheeri ah oo taxane ah - laakiin mar kaliya marka ay macaamiishu galaan. Websaydhyada ay daabaceen waa kuwo aad u cad, kooban, oo saaxiibtinimo u leh beddelaad. Waxaan siineynaa macluumaad kugu filan oo ku saabsan jihooyinka si aan uga sii qeyb galno, laakiin kuma filna inaan ka cararno kuwa kale oo laga yaabo inay yihiin rajo wanaagsan
Waa dheelitir taxaddar leh. Macluumaad badan ayaad ku bixin kartaa bogga internetka oo wali waad beddeli kartaa dadka ... laakiin waxaan aaminsanahay in bogagga ugu fiican ay ka fogaanayaan liisaska astaamaha iyo qeexitaannada badan. Iyaga, halkii, waxay bixiyaan markhaatiyada macaamiisha, faa'iidooyinka iyo natiijooyinka. Ka fogow tayada, adeegga iyo khibradda. Bedelkeeda waxaad diirada saartaa xanuunka keenay booqdaha halkaas iyo sida aad uga caawisay dadka kale inay yareeyaan xanuunkooda.
Tags: facebook galplugin bulshadasaxeex bulshocalaamadda bulshadalogin twitter
SEO: 10 Imtixaanada Iskuxirka Si Looga Fogaado
Nov 5, 2009 at 2: 42 AM
Markii aan dib u naqshadeynay boggeena, waxaan yareeynay tirada guud ee bogagga, waxaanna u wareejinnay waxyaabo dheeraad ah barteenna halkaasoo dadku ka raadin karaan haddii ay dhab ahaantii doonayaan!
Gaadiidka ku socda bogagga muhiimka ah ayaa kordhay, sidoo kale heerka ku-qoritaanka ee ku jira bartayada.
Nov 5, 2009 at 3: 21 AM
Waxaan ku jiray iibka muddo dheer. Bixinta macluumaad aad u badan isla markiiba waxaa loo yaqaan 'barfing' ee macaamiisha. Kaliya siiya wax ku filan oo ay ku sii hayaan.
Nov 5, 2009 at 11: 54 AM
Nice post Doug. Xaqiiqdii waxaan qoray qoraal marti ah oo ku saabsan fududaynta webka Liz Strauss. Maskax weyn wax isku mid ah. 🙂 Iska hubi: http://bit.ly/21dXf2
Fudud ayaa ka fiican Toos ugu tag barta bartaada internetka.
Nov 5, 2009 saacadu markay tahay 7:31 PM
Boostada martida ee Liz? Adiga waa xiddig dhagax weyn!
Nov 5, 2009 saacadu markay tahay 7:34 PM
Tababaraha iibka ayaa iigu yeera daadinta nacnaca. 🙂 Barfing waxay noqon kartaa mid sax ah, in kastoo!